5 အကောင်းဆုံးအသံ Recorder 2018 (Updated) ဒေါင်းလုပ် | WikiWon
5 အကောင်းဆုံးအသံ Recorder 2018
On this page, you will get the 20 အကောင်းဆုံးအသံ Recorder 2018 သင့်ရဲ့ဆန္ဒနှုန်းအဖြစ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ်ကောင်းသောအသံဖမ်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိနိုင်ရဖို့သင်မူကား, အခြားသူများအားသင်၏အချိန်မဖြုန်းတီးနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးအသံ Recorder ရ.
15အကောင်းဆုံးအသံ Recorder
1.0.1 အသံ Recorder
1.0.2 လွယ်ကူသော Voice ကို Recorder
1.0.3 hi-မေးက MP3 အသံ Recorder
1.0.4 ကြက်တူရွေး Pro ကို
1.0.5 RecForge II ကို
1.0.6 စမတ် Recorder
5 အကောင်းဆုံးအသံ Recorder
လစဉ်ပေး Audio Recorder ကဲ့သို့သင်တို့နှုန်းအဖြစ်မည်သည့်စကားသံကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ရွေးချယ်စရာ၏စာရေးပေးလိမ့်မည်.
မူသောသင်တို့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာစံချိန်နှင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်းအသံရန်လွယ်ကူစေသည်. တစ်ခုကအလိုလိုသိမှတ်တမ်းတင် interface ကိုစံချိန်တင်ရန်လွယ်ကူစေသည်, ခေတ္တရပ်ဆိုင်း, ပြင်ဆင်ရန်အသံနှင့်ပိုပြီး.
မိုဘိုင်းပေါ်မှာဤတစျခုအရကောင်းသော options များ, ဒီအသံဖမ်းအတွက်ကောင်းသောသတင်းတို, သင်သည်လည်း tablet များကိုအပေါ် Install နိုင်ပါတယ်.
လွယ်ကူသော Voice ကို Recorder
လွယ်ကူသော Voice ကို Recorder အရေးကြီးသောအချိန်လေးမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်နေ့တိုင်းအဖော်ဖြစ်ပါသည်. capture အအစည်းအဝေးများ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်စု, အတန်း, သီခငျြးမြား, ပြီးအများကြီးပို, အချိန်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ!
အချိန်မကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချုံ့ format ကိုရွေးချယ်ဖို့ကထို option နှင့်အတူ, it’s easy to record even the longest classes and lectures. The pro version also removes the advertising from the free version.
အသံမှတ်စုအကြားလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်, အစည်းအဝေးများ & ပို့ချချက်, နှင့်ဂီတ & အသုံးပြုရလွယ်ကူအပြင်အဆင်နှင့်ရလာဒ်ကဒိနှင့်အတူကုန်ကြမ်းသံကို.
hi-မေးက MP3 အသံ Recorder
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစကားသံကိုမှတ်စု, အုပ်စုတစ်စုဆွေးနွေး, တီးဝိုင်းအလေ့အကျင့်, ဖျော်ဖြေပွဲ, ပို့ချချက်, ဆွေးနွေးပွဲ, တရားဒေသနာနှင့်ဤမျှလောက်သင်ကြားနိုင်သည်ပိုပြီး-လျှင်, app ကိုပြုလုပ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်.
Recordings are stored as MP3 files in real-time, အရာအလုံအလောက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ကြပြီးလုနီးပါးနေရာတိုင်းကစားနိုင်ပါတယ်.
အထိတစ်ဦးပြောင်းလဲနည်းနည်းမှုနှုန်းနှင့်အတူအသံအရည်အသွေးကို Customize 320 kbps. သင်တို့သည်လည်း WAV အတွက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်, OGG, m4a, နှင့် FLAC (စမ်းသပ်ဆဲ) ကို formats.
ကြက်တူရွေး Pro ကို
Record yourself or any voice message in high quality with the best dictaphone for Android. ကြက်တူရွေး Download, ယနေ့သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအသံဖြင့်မှတ်စုတိုကယ်တင်နှင့်ပိုပြီးစနစ်တကျဖြစ်ခြင်းကိုစတင်ရန်.
ကြက်တူရွေး Pro ကို (In-app ကိုဝယ်ယူအဖြစ်ရရှိနိုင်) သငျသညျဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုအသံဖမ်းခွင့်ပြု, ဇယားခံတိကျတဲ့အချိန်နှင့်ရက်စွဲကိုအဘို့နှင့် Google Drive သို့မဟုတ် Dropbox သုံးပြီးမိုဃ်းတိမ်ကိုရန်သင့်အပုဒ်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်. ကြက်တူရွေးအချိန်မကန့်သတ်သို့မဟုတ်လုံးဝမလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်. ကျော်နှင့်အတူ 100 ကွဲပြားခြားနားသော setting ကိုပေါင်းစပ်, သင်သည်တတ်နိုင်ထုညှိသင့်ရဲ့အသံသွင်းခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်.
RecForge II ကို
အသံ Recorder, အသံ, မှတ်စု, သတ်ပုံ, ပှဲမဝငျမီပွငျမှာကငျြးပခွငျး, အစည်းအဝေး, ဟောပွောပှဲ, ဂီတသင်ယူမှု, EVP, စတူဒီယိုအသံဖမ်း, … mp3, အတွက်, m4a, ogg, WMA, opus, ရီးရဲလ်အချိန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု• FLAC နှင့် WAV codec (အသံလှိုင်း Analyzer နထေိုငျ)
On-the-fly အင်္ဂါရပ်တစ်ခုခုန်ကျော်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဆွေမျိုးတိတ်ဆိတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုညဥ့်အိပ်စက်မှုဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းတင်ဖို့အသုံးပွုနိုငျ (သို့မဟုတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားဟောက်တတ်တဲ့, ပထမဦးဆုံးကြွလာသမျှ :)), သင့်ရဲ့ကလေးထိန်းတစ်ဦးကိုပုံမှန်တစ်နေ့, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများ, သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်ဂစ်တာနှင့်မနာသီချင်းဆိုသို့မဟုတ် play ဘယ်လို. ဒါဟာစိတ်ကူးင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပါပေး! 🙂
အပြာရောင် Whale စိန်ခေါ်မှု APK ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းဒေါင်းလုပ် (သတ်သေဂိမ်း)
Android App များ, သတင်း	5 အကောင်းဆုံးအသံ Recorder,5အကောင်းဆုံးအသံ Recorder 2017,5အကောင်းဆုံးအသံ Recorder 2018, Voice Recorder	bookmark
ယခင်အပိုဒ် Big Bash Cricket Game for Android (Updated)
next ကိုပုဒ်မ Ride Game for PC Free Download